Iyo Universim inowanikwa paSteam yevatambi vanga vakamirira iyo ... | Linux Vakapindwa muropa
Yunivhesiti ndeyekufananidza kweIndie uye mutambo wemavhidhiyo mutambo wakagadzirwa neCrytivo Games. Iwo mutambo unovimbisa uye wakasiyana uyo zvirokwazvo akawanda emitambo anomirira. Mune ino mhando yesimulator, mutambi anotora chinzvimbo chaMwari, aine akateedzana emapuraneti ari kutarisira kuti uchafanirwa kubata nekuvandudza budiriro kuburikidza neakasiyana mazera. Zvakanaka, isu tine nhau dzakanaka, nekuti kana iwe uchida izvo zvawakaverenga, ziva kuti yatovepo paStam neHumble Store yeMicrosoft Windows, Apple MacOS uye yako GNU Linux distro.
Musoro unounza akateedzana matsva uye anodada mazano. Sezvandambotaura, zvese zvinotanga kubva munzvimbo ine hunyoro kwaunove iwe masimba amwari uye ichachinja kuenda mberi kuburikidza nemazera akasiyana. Pamusoro pezvo, iwe unozogona kukanganisa sarudzo uye shanduko dzepasi dziri mukutenga kwako uye unogona kunyange kuranga vasingatendi nehunyanzvi hwako hwemashiripiti. Iwe unogona kutoyanana pamwe nezvinhu zvemunyika uye nekugadzira njodzi dzinongoitika dzega, nezvimwe. Hapana chinogona kukutadzisa iwe kunakidzwa ...
Pasi pekuchengetwa kwako nekutungamirwa, iwe unozogadzirisa mabudiriro kuti ufambire kubva kunguva dzekare kusvika kune mamwe mazuva ano, asi iwe zvakare unokwanisa kusangana nuggets, rudzi rwusina kusimba uye rwunopenga kana mhando dzinoenderana nehutungamiriri hwako kuvaka, kutsvagisa uye kufambira mberi. Ndokureva, uyu mutambo wevhidhiyo unovhengana nehunyanzvi uye simulation kunyora yako pachako nhoroondo seyesimba rezvose zvakasikwa zvinopihwa neUniversim.
Nuggets zvakare vane zvavanoda, uye ivo vanofanirwa kuwana zvimwe zviwanikwa kuti vararame, saka unofanira kuvatarisira nekuvapa mvura yekumwa, chikafu, zviitiko zvekuvaraidza kuwedzera mufaro wavo, uye hupenyu hwehupenyu, izvo zvichachinja kubvira panguva yematombo kusvika panguva yemazuva ano ne nzvimbo yekufamba uye kugona kwemhando yepamusoro matekinoroji. Uye zvese zvakashongedzwa nemamwe maficha akanaka izvo iwe uchaona neUniversim.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Iyo Universim inowanikwa paSteam yevatambi vaive vakamirira iyo ...